I-Realme U1: iimpawu, iphepha lobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka | I-Androidsis
Ukulandela umboniso wamva nje kunye nokumiliselwa kwe Helio P70, iprosesa entsha kunye yakutshanje evela kwiQualcomm yeembangi, kuye kwakho into eninzi yokuba yeyiphi i-smartphone eya kuba yeyokuqala. Ngoku, ukulinda kufikelele esiphelweni, kuba ngu I-Realme U1 ifowuni eyenzayo, kanye njengoko besilindele.
I-subpo brand endala yakwa-Oppo Realme namhlanje isungule olu luhlu luphakathi kwimakethi yaseIndiya, eyona yona ijolise kuyo ikakhulu. Yi le i-smartphone yokuqala kwikampani entsha ye-'U 'yeefowuni, egxile kubasebenzisi ababeka ukubaluleka okukhulu kwiiselfies kubomi babo bemihla ngemihla.
1 Iimpawu zeRealme U1 kunye nokucaciswa
Iimpawu zeRealme U1 kunye nokucaciswa
I-Realme U1 ifaka isikrini seWaterdrop -njengoko esenza njalo Oppo F9Isisombululo esigcweleyo se -HDHD kunye ne-diagonal yee-intshi ezi-6.3. Esi sisombululo seepikseli ezingama-2,340 x 1,080, umyinge we-90.8% wesikrini ukuya kumzimba kunye ne-19.5: umlinganiso we-9. Kwelinye icala, isikrini sibonelela ngokukhanya kwe-450 kunye ne-1500: 1 umahluko womlinganiso.
Iselfowuni ine-glossy back kunye ne-diffraction gradation okoko isixhobo inezinto ezili-13 zeteknoloji elaminethiweyo, ethi inkampani iyibize 'Uyilo lweNtsika yokuKhanya'.
Njengoko sele sibonisile, isixhobo esitsha senkampani I-smartphone yokuqala yehlabathi enikwe amandla yi-chipset yeMediaTek Helio P70, Inkqubo-kwi-Chip eyakhiwe yi-TSMC phantsi kwe-12nm FinFET technology. Ukongeza, eli candelo libonisa iiCortex-A73 kunye neCortex A53 cores ngolungelelwaniso olufanayo '4 + 4', kunye ne-ARM Mali-G72 GPU eya kwanela ukuqhuba uninzi lwemidlalo, ngaphandle kwengxaki, efumaneka Ivenkile yokudlala.
Iza ngohlobo lwe-RAM kunye neROMI-3 GB ye-RAM ene-32 GB yokugcina ngaphakathi kunye ne-4 GB ye-RAM ene-64 GB yokugcina ngaphakathi. Kukho nekhadi le-microSD slot ukuya kuthi ga kwi-256GB, evumela abasebenzisi ukuba bandise ngakumbi amandla okugcina ifowuni.
I-Realme U1 efotweni
Ukuqaqanjelwa kwe-smartphone yimodyuli yekhamera. bucala ngasekhohlo ifaka useto lwekhamera ezimbini ngasemvaInesisombululo esine-13-megapixel isisombululo esisisiseko kunye ne-2-megapixel yesibini sensor. Kubandakanya iAI Photography kunye neempawu zeAI Beautigy + zokuphucula amava okufota. Ixhasa i-Studio Portrait Lighting, Super Vivid 2.0, kunye ne-AI Scene Detection, kunye nomsebenzi wokurekhoda ividiyo ohamba kancinci. Ngokunxulumene, inkampani ityhile ukuba eli nqaku litsha liza kuphehlelela kwifayile ye- Realme 2 Pro Kamva kulo nyaka.
Ngaphambili, ifowuni ifakwe i Inzwa ye-576 megapixel Sony IMX25 sensor ene-f / 2.0 ukuvula kunye neempawu ezinje ngeSmartter Groupfi yokuthatha iiselfie zeqela. Inzwa ikwaxhasa inqaku lokuvula elingaphambili le-AI, ebanga ukuba ivule ifowuni kwimizuzwana nje eyi-0,1.
Iinketho zonxibelelwano kwisixhobo zibandakanya inkxaso ye-Dual 4G VoLTE, i-band ezimbini ezingama-802.11 b / g / n / ac WiFi (2.4 GHz + 5 GHz), iBluetooth 4.2, kunye neGPS. Ifowuni isebenzisa inkqubo ye-Android 8.1 Oreo phantsi kweColorOS 5.2 kunye isebenza ngebhetri yomthamo we-3,500 mAh, eya kugcina i-smartphone kwiiyure ezininzi.
I-smartphone, ethi inkampani ichukumise njenge- "India's SelfiePro," ziya kufumaneka ukuthengwa eIndiya ngeAmazon. Iza ngokhetho lwemibala emithathu: ibhongo elimnyama, elinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide evuthayo.
Ngokwamaxabiso kunye nokufumaneka, imodeli ye-3GB RAM inexabiso nge-Rs 11,999 (~ € 150), ngelixa Imodeli ye-4 GB ye-RAM ixabisa i-14,999 (~ 187 euros). Iya kuthengiswa ukusuka nge-5 kaDisemba.
Okokugqibela, kunye neRealme U1, inkampani ikhuphe izincedisi ezimbalwa-Iye yasungula imeko yokhuseleko ye-'Realme U1 Iconic Case 'kunye neefowuni ze'Realme Buds', zombini ezinamaxabiso angama-499 rupees (~ 6.25 euros).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme U1, ifowuni yokuqala eneprosesa yeHelio P70 evela eMediatek, ngoku isemthethweni
Cinga ngenyameko ngamanyathelo akho ngamanyathelo kunye neeDragons